Monsieur Patrick Pouyanné, TOTAL doit cesser de financer la junte en Birmanie - We Sign It
FR EN MY
Monsieur Patrick Pouyanné, TOTAL doit cesser de financer la junte en Birmanie
Total réalise 0,5% de ses opérations internationales en Birmanie. L’exploitation de gisements de gaz permet à la multinationale française de générer des profits annuels de l’ordre de 76 millions €. Mais ses activités ont une conséquence très grave : elles apportent plus de 220 millions € par an à la junte militaire qui réprime dans le sang les manifestations démocratiques.
Total est donc un pourvoyeur majeur de devises aux généraux qui répriment sauvagement une révolte populaire contre le coup d’Etat du 1er février, et confisquent les libertés publiques.
Total s’est implanté en Birmanie dans les années 90 en pleine junte militaire. En 2005, Total avait déjà dû indemniser des victimes birmanes de travail forcé sur le chantier de Yadana, pour éviter des poursuites judiciaires. Aujourd’hui, Total finance de nouveau la junte au mépris de la volonté de la population birmane.
Ainsi, le CRPH, comité représentant les parlementaires élus et reconnu par la population birmane comme son représentant légitime,apublié un courrier adressé le5mars 2021 au PDG de Total demandant fermement aux compagnies pétrolières présentes en Birmanie de cesser toutes leurs relations d'affaires avec l'armée birmane. Les représentants du peuple demandent le gel des versements à la junte jusqu'à la restauration du gouvernement démocratiquement élu.
En effet, Total est actionnaire principal et opérateur du gisement de Yadana et elle verse une rente colossale à la Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE). Cette entreprise publique opaque est désormais sous le contrôle direct de la junte, qui s’approvisionne en armes chinoise, russe, israélienne et nord-coréenne pour réprimer les manifestations et attaquer les minorités ethniques.
Total se dit "préoccupée", mais l'entreprise tente de justifier le maintien de sa présence pour des motifs de « contrat », alors que son partenaire australien, Woodside,adécidé de suspendre ses activités offshore du fait de la répression.
Depuis le 1er février, des millions de birmans et birmanes manifestent chaque jour contre la junte militaire qui répond par la violence, les arrestations, les tortures, les viols et les intimidations. Une manifestationamême eu lieu devant le site exploité par le consortium dirigé par Total pour demander son retrait. L’armée birmane, déjà coupable des massacres de la minorité musulmane Rohingya et des autres minorités ethniques, l’est aujourd’hui de centaines de meurtres de manifestants démocrates.
Pour le Rapporteur Spécial de l’Onu sur la Birmanie, les meurtres, persécutions, arrestations et exécutions arbitraires en cours relèvent probablement de crimes contre l’Humanité.
Un peuple entier est aujourd'hui dans la rue, et regarde qui se tient à ses côtés. Les Birmans n'oublieront pas quels pays et quelles entreprises les ont soutenus. Toute compagnie présente en Birmanie doit l'entendre. Il yaaujourd'hui pour Total et les autres multinationales un choix à faire : se tenir auprès de la population ou se tenir auprès du régime qui l'oppresse.
Nous demandons à Total de bloquer tout paiement à la junte militaire jusqu’à ce que le pays soit dirigé par le gouvernement civil démocratiquement élu.
Mathieu Flammarion, Président d’Info Birmanie
Alain Deneault, philosophe, auteur de "De quoi Total est-elle la somme"
Danièle Obono, députée de Paris (17e circonscription) – Groupe "La France insoumise"
Frédéric Debomy, ancien Président d'Info Birmanie
Sophie Brondel, coordinatrice d'Info Birmanie
Vincent Brossel, ancien responsable bureau Asie de Reporters sans frontières
Pétition en birman
Total ရေနံကုမ္ပဏီ ရဲ့နိုင်ငံတကာတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှူ ၀,၅% သည်မြန်မာပြည်တွင်ဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံပေါင်းစုံ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်များမှ လဲနှစ်စဉ်အမြတ်ငွေ ယူရို၇၆သန်းရရှိနေပါသည်။ ထိုရင်းနှီးမြှပ်နှံမှူများမှ ယနေ့
ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း သွေးထွက်သံယိုဖြစ်အောင် နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို တနှစ်လျင် ယူရိုသန်း ၂၂၀ ရရှိစေခြင်းဟာအလွန်ဆိုးရွားသောနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် Total သည် ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မှစရျ် စစ်အာဏာသိမ်းပြီး လူထုတော်လှန်းရေးကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းနေသည့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကိုအဓိကနိုင်ငံခြားငွေထောက်ပံ့ပေးသူဖြစ်နေပါသည်။
Total သည် စစ်အစိုးရလက်ထက်၁၉၉၀ ခုနှစ်ပိုင်းတွင် မြန်မာပြည်သို့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ခုနှစ် တွင် Total မှ ဥပဒေကြောင်းအရတရားစွဲဆိုမှူများကို ရှောင်ရှားရန် ရတနာဓါတ်ငွေ့တူးဖော်ရေးလုပ်ကွက်မှ မတရား ခိုင်းစေခံခဲ့ရသောလုပ်သားများအား လျော်ကြေးပေးခဲ့မှူများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ယနေ့အချိန်မှာတော့ မြန်မာလူထုက မထောက်ခံတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကို တဖန်ထပ်ပြီးငွေကြေးထောက်ပံ့နေပါသည်။
ထို့ကြောင့် ၀၅၊၀၃၊၂၀၂၁ နေ့တွင် မြန်မာပြည်သူကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီသည် Total ကုမ္ပဏီဥက္ကဌ နှင့်တကွအခြားသော ရေနံကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများကို စစ်တပ်နှင့် တွဲဖက်လုပ်နေသောလုပ်ငန်း အားလုံးရပ်တန့်ပေးရန် စာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်သူ့လူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်များက ဒီမိုကရေစီနည်းအရ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော အစိုးရပြန်လည်ထူထောင်သည်အထိ ပေးချေရန် ငွေများကို ထိမ်းသိမ်းထားရန်တောင်းဆိုပါသည်။
လက်တွေ့တွင် Total သည် ရတနာစီမံကိန်း၏ အဓိကအစုရှယ်ယာရှင်နှင့် လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပြီးမြန်မာရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (MOGE) အားကြီးမားသည့်ငှားရမ်းခပေးဆောင်နေပါသည်။ ယခုအချိန်ထိ ဤအစိုးရပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဆန္ဒပြမှုများကိုနှိမ်နင်းရန်နှင့်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်တရုတ်၊ ရုရှား၊ အစ္စရေးနှင့် မြောက်ကိုရီးယားနိင်ငံတို့မှ လက်နက်များကိုဝယ်ယူနေသော စစ်အစိုးရ၏ တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိပါသည်။
Total မှ''စိုးရိမ်စရာအခြေအနေ'' ဖြစ်သည်ဟုပြောနေသော်လည်းကုမ္ပဏီအနေဖြင့် "ကန်ထရိုက်" ၏ အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေရပါသည်ဟုအကြောင်းပြချက်ပေးနေသော်လည်း သူရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သြစတြေးလျ၏ Woodside ကမူ ကမ်းလွန်လုပ်ငန်းများကို လူထုအားဖိနှိပ်မှုကြောင့် ရပ်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မှစ၍ သန်းချီသောမြန်မာပြည်သူတို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းကို စစ်ကောင်စီမှ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်း၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း နှင်းမုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခြင်းများဖြင့် နှိမ်နင်းခဲ့ပါသည်။ Total မှ ဦး ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ရှေ့မှောက်တွင်ပင် လုပ်ကွက် ရုပ်သိမ်းရေးကတောင်းဆို ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မြန်မာစစ်တပ်သည် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများနှင့် ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူနည်းစု၏ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုအတွက် အပြစ်ရှိသလို ရာပေါင်း များစွာသော ဒီမိုကရေစီလိုလားသည့်ဆန္ဒပြပြည်သူတို့အားသတ်ဖြတ်မှုအတွက်လဲအပြစ်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် အနေဖြင့် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော လူသတ်မှုများ၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများ၊ မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချမှုများကို လူသားမျိုးနွယ်စု အပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။
ဒီနေ့လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြနေသူလူအများစုကသူတို့ဘက်မှာရပ်တည်ပေးမည့်သူကိုမျော်နေပါတယ်။ မည်သည့်နိုင်ငံများနှင့် မည်သည့်ကုမ္ပဏီများက၎င်းတို့အား ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်ကို မြန်မာများ မေ့လျော့မည်မဟုတ်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတိုင်းပြည်သူ့သဘောထား ကိုနားလည်ရမည်။ ယနေ့တိုတယ်နှင့်အခြားနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများအတွက်မူ ရွေးချယ်စရာတွေရှိပါသည်။ ပြည်သူနှင့် အတူ ရပ်တည်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖိနှိပ်သောအစိုးရနှင့်အတူရပ်တည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော အရပ်သားအစိုးရမှ အုပ်ချုပ်သည်အထိ စစ်ကောင်စီအား မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမှ မပြုလုပ်ရန် Total ကိုကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည်။
Mobilisation créée par Info Birmanie